Nzira dzekudyara kuti ubude kunze uri mupenyu mu2019 | Ehupfumi Zvemari
Hazvisi chakavanzika kuti gore rino 2019 richange rakaomarara kumisika yese yemari, ese emari uye mari yakatarwa. Izvi zvinoratidzwa nezano revanoongorora zvemari vanonyanya kukosha avo vanoyambira kuti gore rino rinogona kuunza kushamisika kuzhinji kune vashoma nevapakati varimi. Mupfungwa iyi, indekisi inosarudza yemusika weSpanish wemusika, iyo Ibex 35, inotanga kubva kune imwe yematanho epasi mumakore achangopfuura. Kunyanya, kubva ku 8.500 points uye mushure mekudzikira mu2018 kwete pasi pe15%, zvichienderana nemamwe misika yepasi rose.
Mupfungwa iyi, tarisiro yekudyara mumusika wemasheya haisi kutovimbisa zvachose. Kwete zvishoma. Zvisinei nekuti iyo Bankinter yekuongorora dhipatimendi inofunga kuti "tinoramba tichifunga kuti hazvina musoro kuti misika yemasheya ivhare nekurasikirwa kana mhedzisiro yebhizimusi ichiwedzera nemaviri manhamba uye hupfumi hwepasi rose hwadzikira asi husiri kuenda kune chero hupfumi." Iyo poindi yetariro isina kugoverwa nevamwe vamiririri vezvemari vari chokwadi zvakashata mu kuongororwa vanoitira misika yemari gore rino.
Imwe yemafungiro aya inobva kune vanoongorora zvemari vakazvimirira vanoyambira kuti mumwedzi iri kuuya iyo Ibex 35 aigona kushanyira nhanho pamatanho mazana matanhatu nemazana mashanu. Izvi mukuita zvinoreva kuti zviyero zvemunyika zvinodzikira mumadhijiti akapetwa uye kuti kurasikirwa kwacho kungave kwakakura kwazvo kune vanoita mari vane nzvimbo dzakashama mune izvi zvemari zvinhu. Panorama mune iyo misiyano yakajeka kwazvo pakati pevamiriri vezvemari vakasiyana. Naizvozvo, chiyero chikuru icho vatyairi vadiki nepakati vanogona kutora kungwara uye pamusoro pezvimwe zvehunyanzvi kufunga.
1 Strategies muna 2019: mikana
2 Enda kupfupi
3 Tarisa hombe-chivharo masheya
4 Nyorera chinorambidza
5 Usatakure nekutora rebound
6 Ibva pane hunhu hunopesana
Strategies muna 2019: mikana
Ehezve, hapana kushomeka kwemazwi ane chiremerera anosimbisa kuti hupfumi huchave hwakanakisa gore rino. Iko kukosha kuri kwakadzika kwazvo, uye purofiti inoita kunge ichikura kwakakomberedza 6% uye 8%. Semhedzisiro yeichi chionekwa chinoitika mumisika yemari, zvinoita sezvine musoro kuti musika wemasheya uri kuita nemazvo. Vamwe vaongorori vezvemari, vakaita sevaya vanobva kuBankinter, vanotaura kuti chiitiko chitsva chemusika wemasheya chinofanirwa kuve chakanakira zvido zvevashambadziri, nemitero inopfuura gumi muzana.
Kune rimwe divi, chinhu chimwe chinoratidzika kunge chakajeka kune vese, uye ndiko kuti nguva ino varimi vanofanirwa kutsanangudza zano ravo rekutarisana nekuderera kana kunyange kuderera kwehupfumi uko vanozivisa vanozivisa. Zvakanyanya kuchenjera kungwarira kudzivirira zvese zvakaitika mudambudziko rezvehupfumi rapfuura. Iko chikamu chakanaka chevashambadzi chakasiya maeuro mazhinji munzira. Pane ino nguva, maonero evanoongorora zvemusika haabvumirane, saka kutsanangura nzira yekudyara hakuzove nyore gore rino. Zviitiko zvakakosha seku hondo yekutengeserana pakati peUS neChina, Brexit kana kusarudzwa kwesarudzo senge yeEuropean muna Chivabvu inogona kukanganisa zvakanyanya kuvandudza misika yemasheya gore rino.
Tichifunga nezvechiitiko ichi zvakawandisa, yekutanga nzira dzekudyara kuita dzinosanganisira kusimudzira mashandiro ekutenga nekutengesa chete munguva pfupi. Iyo ndiyo yakanakisa chiyero chekudzivirira uye kuchengetedza mari yedu pamberi peakanyanya kusagadzikana zviitiko mumisika yepasi rose yemari. Mupfungwa iyi, zano rakanakisa mukuita uku kunoenderana nekushanda pamwe nekuchengetedzeka kune kuwedzera kwekuwedzera inonakidza kwazvo. Kufambisa kunogona kuitwa mukati memazuva mashoma aonekwa. Kuti usabatike munzvimbo dzechengetedzo yakaongororwa.
Mune chero gore, rino harisi gore rekuita yakasimba kwazvo mashandiro. Kunze kwekunge ivo vachive nazvo kwakawanda ehupenyu hwedu, sezvakaitwa nevabereki vedu kana sekuru nasekuru mune dzimwe nguva. Iko kwaive mari yemari yaive chikamu chenhaka. Zvakanaka, ino haisi nguva yakakodzera kwazvo yekugara mumafambiro aya nekuti anogona kudhura kwazvo. Kunyanya kana paine zvinodiwa zvemari pane imwe nguva kana imwe.
Tarisa hombe-chivharo masheya
Ino zvakare haisi nguva yakakodzera yekuyedza zvidiki kwazvo zvivharo. Pakati pezvimwe zvikonzero zvekukosha kwakakosha, nekuti ndizvo izvo zvinopa kukwirira kusagadzikana mukuchinja kwemitengo yavo. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi kwekuchengetedzeka ivo pachavo. Saka zviri nani kunongedza hombe kukosha kweiyo equices indices. Hakusi kuti ivo vanozoita zvirinani, asi kuti ivo vachapa chengetedzo huru kune vashoma nepakati varimi.
Kune rimwe divi, iine hombodo hombe zvichagara zviri nyore kwauri kuti uwane iyo kupora mumitengo yavo. Chinhu chinodhura zvakanyanya mumakambani madiki uye epakati-chivharo nekuti mune dzimwe nguva havatombosvika pamatanho aya zvekare. Mumakore mashoma apfuura pane mienzaniso isingaverengeke inosimbisa iyi yakasarudzika tsika. Ichi ndicho chimwe chikonzero chekusarudza anotungamira masheya pane emunyika kana epasi rese stock exchange. Kwete pasina, iwe uchagara uchidzivirirwa uye pamusoro pezvose munguva dzekusagadzikana kukuru mumusika wemasheya.
Kuisa mune yako yekutenga odha mvumo inonzi yekumira kurasikirwa hakuzovi chinhu pfupi pane yakakosha mugore seyakaomarara sezviri kutarisirwa kuve ino 2019. Mupfungwa iyi, anoshandisa kudzivirira kudzivirira zvaunofarira semudhara mudiki nepakati. Nechikonzero chiri nyore kwazvo chekutsanangura uye icho chinosanganisira iwe unongova chete nezvakarasika izvo iwe zvaunogona kungofungidzira zvichibva pane zvako chaizvo zvaunoda. Neiyi nzira, iwe unodzivirira kuve neyakasimba induction mune yako mari chirevo.
Kuti ushandise iyi odhiyo yemiganhu yekurasikirwa zvinongodiwa chete kuti iwe uburitse pachena kusvika pamutengo wei unokwanisa batisisa mumadonhwe mumisika yemari. Icho chiyero chinoshanda kwazvo icho chinokubatsira iwe kuchengetedza yako yawakaisa mari pamusoro pezvimwe zvekufunga zvehunyanzvi. Uye zvakare, inogona kushandiswa nemumwe mudiki uye wepakati investor uye pasina kana mari yehupfumi kana muchimiro chemakomisheni. Iyo yakavhurika kune ese marudzi emazano mune stock stock chikamu.
Usatakure nekutora rebound
Mugore rino, nhamba yakakosha sekudzokeresa pamusika wemasheya ichave ine njodzi zvakanyanya. Nekuti iwe unogona kuwira mumisungo iyi inopihwa nemisika yemari uye kutenga izvo zvaunogona kuzvidemba mushure memasangano mashoma ekutengesa. Nekuti mutsauko uripakati peiyo yakatorwa mutengo uye mutengo wekutenga inogona kunge iri kure kwazvo. Iyi ndiyo imwe yenjodzi dziri pachena dzaunoburitswa pachena mugore rino rakaomarara kuti uwane mari inobatsira nekirasi iyi yemari yemari.
Kune rimwe divi, iwe haugone kukanganwa kuti iyo rebound mu bearish maitiro dzinofanira kushandiswa pakapesana. Ndokunge, kurerutsa portfolio zvishoma nezvishoma. Kungoti nekuti iwe unokwanisa kuzviwana iwe uri asingadiwe mamiriro ezvinhu uye izvo zvinogona kutungamira kune yako capital kudonha zvine ngozi zvakanyanya. Ichi chinhu chaunofanira kujairira mumwedzi iri kuuya. Nekuti hapana mubvunzo kuti uchave mumwe wemiedzo mikuru iwe yaunofanirwa kupinda munzvimbo mumisika yemari.
Ibva pane hunhu hunopesana
Chero zvazvingaitika, uye kana paine chikonzero chero chipi zvacho chaunoda kuita mashandiro pamusika wemasheya mukati megore rino, haufanire kusarudza kuchengetedzeka kwakaomarara kuti ushande. Hazvishamisi kuti iwe watongerwa kukudziridza akateedzana mashandiro aunogona kuzvidemba munguva pfupi. Kuti ndikupe imwe pfungwa yekufungidzira yechinhu ichi, hapana zvirinani pane kuisa semuenzaniso zvakaitika mugore rapfuura na Dia. Mugove wakaenda kubva ku4 euros kusvika padanho re0,30 euros. Haufanire kudzokorora kuita uku.
Zvakanaka, gore rino hazvingashamise zvakanyanya kuti mhando yezviito izvi mune mamwe masheya zvinodzokororwa. Uye saka, iwe unofanirwa kuve unoteerera zvakanyanya kune zviratidzo zvekushaya simba mumakambani aya akanyorwa pamisika yemari. Kunze kwekufungisisa kwayo kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa. Hazvishamisi kuti rino rinenge riri gore rizere nekuvhunduka kukuru. Uye kunyangwe paine mikana yebhizinesi, hazvisi izvo zvishoma kuti kuchave nekuwanda kwenjodzi mumusika wemasheya, zvese munyika nekunze kwemiganhu yedu.
Chero zvazvingaitika, uye sekupfupisa, kungwara kunofanirwa kuve kunonyanya kuratidza zviito zvako zvese mumisika yemari. Iko pasina mubvunzo kuchauya akawanda akaoma nguva kune vashoma nepakati varimi. Iko iko kiyi ichave yekuita sekukanganisa kushoma sezvinobvira uye kune izvi iwe unofanirwa kudzivirira mamwe mashandiro mumisika yequity. Mushure mezvose, izvi ndizvo zvakakumirira mumwedzi inotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Nzira dzekudyara kuti ubude kunze uri mupenyu mu2019